ကိုယျတိုငျထိုးထားတဲ့ ဈေးဝယျအိတျလေး နဲ့ ပွညျသူ့ကာကှယျဆေးထိုးလုပျငနျးတှမှော လှူဖို့ ပါဝငျအားဖွညျ့လာတဲ့ ပိုငျဖွိုးသု – Shwe Likes
တိုငျးသိပွညျသိ ဆရာဝနျ တဈဦး လဲဖွဈတဲ့ သရုပျေ ဆာငျ ပိုငျဖွိုးသု ကတော့ သူမခြ ဈရတဲ့ ဒါရို ကျတာ ဏကွီးနဲ့ လကျထပျထား တာဖွဈပွီး ပြျောရှငျစ ရာ မိသားစုဘ ဝလေးကို တညျဆောကျ ထား တာပဲ ဖွဈပါတယျ။
ဒါရိုကျတာဏကွီးနဲ့ ပိုငျဖွိုးသုတို့ ဇနီးေ မာငျနှံတော့ ယခုလကျရှိဖွဈေ ပျါနတေဲ့ လူထုလှု ပျရှားမှုတှမှောလဲ ပွညျသူတှေ နဲ့အတူ တဈသားတ ညျးပါဝငျခဲ့ပွီး စဈအာဏာရှ ငျကို အမွဈဖွုတျဖို့ ရဲရဲဝံ့ဝံ့ေ တျာလှနျခဲ့သူလဲ ဖွဈပါတယျ။
ဖမျးဝရံထုတျခံ ထားရပေ မဲ့လညျး ဇှဲမလြှော့ဘဲ အမွဲတမျးတကျွ ကှစှာပါဝငျေ ပးနဆေဲ ဖွဈတဲ့ သူတို့ဇနီးမောငျနှံကတော့ လကျရှိမှာေ တာ့ ရှောငျးတိမျးေ နကွရတာ ဖွဈပါတယျ။ သုသု တဈယော ကျကတော့ လကျရှိအခြိနျထိကို ဇှဲမလြော့ပဲ တတျနိုငျတဲ့ ဘကျကနေ တျောလှနျရေး အတှကျ အားတကျသေ ရာ ပါဝငျနဆေဲပါပဲ။
အခုတဈခါမှာလညျး ပွညျသူတှအေတှကျ ကာကှယျဆေးထိုးလုပျင နျးတှမှောလှူဖို့ ကိုယျတိုငျထိုး ထားတဲ့ ဈေးဝယျအိတျလေးနဲ့ ပါဝငျအားဖွညျ့ပေး ခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။
စဈကော ငျစီ အာဏာ သိမျးတာ ယခု ဖဖေျောဝါရီလ ၂၀၂၂ ခုနှဈဆိုလြှငျ ၁ နှဈတိတိ ပွညျ့ပွီဖွဈပါတယျ။ အာဏာသိမျး ကာလအ တှငျး COVID third wave ကို ပွညျသူမြား အပွငျးအထနျ ခံစားခဲ့ရပါတယျ။ အခုအခြိနျမှာလညျး Corona Virus မြိုးစိတျကှဲ Omicron virus ကို မွနျမာနို ငျငံမှာ စတငျတှရှေိ့နပေါပွီ ။
ယခုအ ခြိနျအထိ COVID vaccine တဈကွိမျမှ မထိုးရသေးသော ပွညျသူတှေ မြားစှာကနျြရှိေ နသောကွောငျ့ နောကျတ ဈဖနျထပျမံ၍ COVID စတုတ်ထလှိုငျးနှငျ့ ကွုံတှမှေ့ာ စိုးရိမျစရာဖွဈနပေါတယျ။
ဒါကွောငျ့ သုသု Crochet အိတျလေးေ တှထိုး၊ fundraising လုပျပွီး ရရှိတဲ့ funding အားလုံးကို NUG-MOH ၏ COVID vaccine ကာကှယျေ ဆးထိုးလုပျငနျးမြား အတှကျလှူမယျဆွို ပီးအခုဒီဈေးဝယျ အိတျ(market bag)လေးတှကေိုထိုးဖွဈခဲ့ပါတယျ။
အိတျလေးတှေ ကိုပါဝငျကံ စမျးနိုငျဖို့ ကံစမျးမဲတဈေ စာငျလြှငျ ***မွနျမာငှကေပျြ ၅၀၀၀ နှုနျးဖွငျ့ လညျးကောငျး၊ Crypto currency ဖွငျ့ ဝယျယူလိုပါက ticket တဈေ စာငျလြှငျ3USDT ဖွငျ့ လညျးကောငျး ဝယျယူရရှိနိုငျမှာဖွဈပါတယျ။
သူမ ထိုးထားတဲ့ ဈေးဝယျအိတျ(market bag) လေးက မသေးပဲ အမြားကွီးထညျ့ လို့ဆနျ့နိုငျတဲ့အေ ကွာငျးကို “The Little Yarn of Spring အတှကျ ပထမဦးဆုံး sample ထိုးကွညျ့ထားတဲ့အိတျထဲကို နောကျထပျက ရငျနီဒသေအတှကျထိုး မယျ့ခညျြ လုံးတှထေညျ့ထား တာ ….
ဆိုလိုခငျြတာက အိတျလေးတှကေ ဈေးဝယျအိတျ ဆိုတော့ အမွငျမှာသေး တယျထငျရေ သျာလညျး ပစ်စညျးဆံ့ပါတယျလို့ ….” ဆိုပွီး ဗီဒီယိုဖိုငျလေးနဲ့ အတူ သူမရဲ့ လူမှုကှနျယကျထကျမှာ ရေးသား ထားတာပဲ ဖွဈပါတယျ။
တိုင်းသိပြည်သိ ဆရာဝန် တစ်ဦး လဲဖြစ်တဲ့ သရုပ်ေ ဆာင် ပိုင်ဖြိုးသု ကတော့ သူမချ စ်ရတဲ့ ဒါရို က်တာ ဏကြီးနဲ့ လက်ထပ်ထား တာဖြစ်ပြီး ပျော်ရွှင်စ ရာ မိသားစုဘ ဝလေးကို တည်ဆောက် ထား တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါရိုက်တာဏကြီးနဲ့ ပိုင်ဖြိုးသုတို့ ဇနီးေ မာင်နှံတော့ ယခုလက်ရှိဖြစ်ေ ပ်ါနေတဲ့ လူထုလှု ပ်ရှားမှုတွေမှာလဲ ပြည်သူတွေ နဲ့အတူ တစ်သားတ ည်းပါဝင်ခဲ့ပြီး စစ်အာဏာရှ င်ကို အမြစ်ဖြုတ်ဖို့ ရဲရဲဝံ့ဝံ့ေ တ်ာလှန်ခဲ့သူလဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဖမ်းဝရံထုတ်ခံ ထားရပေ မဲ့လည်း ဇွဲမလျှော့ဘဲ အမြဲတမ်းတက်ြ ကွစွာပါဝင်ေ ပးနေဆဲ ဖြစ်တဲ့ သူတို့ဇနီးမောင်နှံကတော့ လက်ရှိမှာေ တာ့ ရှောင်းတိမ်းေ နကြရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ သုသု တစ်ယော က်ကတော့ လက်ရှိအချိန်ထိကို ဇွဲမလျော့ပဲ တတ်နိုင်တဲ့ ဘက်ကနေ တော်လှန်ရေး အတွက် အားတက်သေ ရာ ပါဝင်နေဆဲပါပဲ။
အခုတစ်ခါမှာလည်း ပြည်သူတွေအတွက် ကာကွယ်ဆေးထိုးလုပ်င န်းတွေမှာလှူဖို့ ကိုယ်တိုင်ထိုး ထားတဲ့ ဈေးဝယ်အိတ်လေးနဲ့ ပါဝင်အားဖြည့်ပေး ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
စစ်ကော င်စီ အာဏာ သိမ်းတာ ယခု ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၀၂၂ ခုနှစ်ဆိုလျှင် ၁ နှစ်တိတိ ပြည့်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ အာဏာသိမ်း ကာလအ တွင်း COVID third wave ကို ပြည်သူများ အပြင်းအထန် ခံစားခဲ့ရပါတယ်။ အခုအချိန်မှာလည်း Corona Virus မျိုးစိတ်ကွဲ Omicron virus ကို မြန်မာနို င်ငံမှာ စတင်တွေ့ရှိနေပါပြီ ။
ယခုအ ချိန်အထိ COVID vaccine တစ်ကြိမ်မှ မထိုးရသေးသော ပြည်သူတွေ များစွာကျန်ရှိေ နသောကြောင့် နောက်တ စ်ဖန်ထပ်မံ၍ COVID စတုတ္ထလှိုင်းနှင့် ကြုံတွေ့မှာ စိုးရိမ်စရာဖြစ်နေပါတယ်။
ဒါကြောင့် သုသု Crochet အိတ်လေးေ တွထိုး၊ fundraising လုပ်ပြီး ရရှိတဲ့ funding အားလုံးကို NUG-MOH ၏ COVID vaccine ကာကွယ်ေ ဆးထိုးလုပ်ငန်းများ အတွက်လှူမယ်ဆြို ပီးအခုဒီဈေးဝယ် အိတ်(market bag)လေးတွေကိုထိုးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
အိတ်လေးတွေ ကိုပါဝင်ကံ စမ်းနိုင်ဖို့ ကံစမ်းမဲတစ်ေ စာင်လျှင် ***မြန်မာငွေကျပ် ၅၀၀၀ နှုန်းဖြင့် လည်းကောင်း၊ Crypto currency ဖြင့် ဝယ်ယူလိုပါက ticket တစ်ေ စာင်လျှင်3USDT ဖြင့် လည်းကောင်း ဝယ်ယူရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
သူမ ထိုးထားတဲ့ ဈေးဝယ်အိတ်(market bag) လေးက မသေးပဲ အများကြီးထည့် လို့ဆန့်နိုင်တဲ့အေ ကြာင်းကို “The Little Yarn of Spring အတွက် ပထမဦးဆုံး sample ထိုးကြည့်ထားတဲ့အိတ်ထဲကို နောက်ထပ်က ရင်နီဒေသအတွက်ထိုး မယ့်ချည် လုံးတွေထည့်ထား တာ ….
ဆိုလိုချင်တာက အိတ်လေးတွေက ဈေးဝယ်အိတ် ဆိုတော့ အမြင်မှာသေး တယ်ထင်ရေ သ်ာလည်း ပစ္စည်းဆံ့ပါတယ်လို့ ….” ဆိုပြီး ဗီဒီယိုဖိုင်လေးနဲ့ အတူ သူမရဲ့ လူမှုကွန်ယက်ထက်မှာ ရေးသား ထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။